Nahoana Ny Soratra Arabo No Tsy Afaka Manafoana Ny Fivalanandrano An-Kalamanjana Ao Dhaka · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Mey 2015 9:56 GMT
Olana ao Bengladesh ny famanizanaimasom-bahoaka nohon'ny tsy fahampian'ny toeram-pivoahana amin'ny ankapobeny. Sasa-poana niady tamin'izany ny tomponandraikitry ny tanàna ao Dhaka amin'ny fanakànana ny lehilahy tsy hamany an-kalamanjana, tamin'ny alalan'ny famantarana amin'ny teny Bengali tao an-toerana ary ny fampitandremana famaizana sy lamandy fa tsy nisy vokany azo notsapain-tanana.
Manantena ankehitriny ny governemanta fa ho afaka hampitsahatra ny fahazarana ny hevitra iray mitondra fihavaozana. Vao haingana ny Ministeran'ny Raharaham-Pivavahana no namoaka lahatsary mampisongadina ny fanentanana nataony “Olana mikasika ny fiteny” ahitana famantarana amin'ny teny Bengali mampitandrina amin'ny fivalanandrano ka efa nosoloina famantarana amin'ny teny arabo ankehitriny, teny masina ho an'ny Bangladeshis.
Angamba ry zareo naka tàhaka an'i India izay mifanila aminy – miady amin'ny olana tahàka izany koa — ka any dia ahitana sarin'andriamanitra Hindoa lahy sy vavy amin'ny rindrina, eritreretina ahazoana vokatra toy izany.
Manao fanamarihana ao amin'ny YouTube i Sufi Faruq :
Mihevitra i Adnan R. Amin ao amin'ny Bilaogy Alal O Dulal fa tsy tonga hatrany amin'ny fototry ny olana ilay lahatsary ary mikendry ny hamorona fiheverana diso ho solon'izany :
Hafetsena ny fampiasana hevitra diso momba ny fivavahana (“teny masina ny Arabo”), mba hisakanana ny tsy fetezana ara-piarahamonina. Nefa manamafy ihany koa sy manome vahana an'izany hevitra diso izany, fa tsy manafoana azy. Azo eritreretina fa ho an'ny ministeran'ny raharaham-pivavahana, ny fanafoanana ny hevitra diso no manatombo kokoa nohon'ny fiarovana ny rindrin'ny tanàna. Raha nisy vola azo ampiasaina ao amin'ny governemanta, azo nampiasain'ny Mpiandraikitra ny Tanànan'i Dhaka izany hamoronana fotodrafitrasa tsara kokoa ho an'ny vehivavy. Na dia sarotra aza ny mamantatra avy any amin'ny efitra fivoriana, ireo toeram-pivoahana 36 misy fitaovana natokana ho an'ny vehivavy dia ampiasain'ny lehilahy ankehitriny. Raha jerena ny tetika ampiasana sy ny tanjon'ilay lahatsary, ny fijerena indray ny laharampahamehan'ny governemanta roa tonta no tokony ho izy.
Ankoatr'izay, nitsikera ny Ministeran'ny Raharaham-Pivavahana i Fariduddin Masud, mpitondra fivavahana tò teny.
Tsy dia nino ilay fanentanana ny Bilaogera Irene Sultana tamin'ny alalan'ny lahatsoratra nataony tamin'ny bilaogy mikasika Toko ho an'ny Vehivavy mitondra ny lohateny hoe “Tsy olan'ny teny Arabo, fa an'ny Toeram-pivoahana ho an'ny Daholobe” :
Milaza ny ezaka vao haingana nataon'ny Praiministra Indiana Narendra Modi ihany koa i Sultana, tamin’ny nanamboarany toeram-pivoahana teny anoloan'ireo tempoly ary nahavitàny toeram-pivoahana 5,2 tapitrisa tao anatin'ny 100 andro voalohany nitondràny.
Ambonin'izany, any India, talohan'ny nandehanan'i Modi nanatontonsa ny fahamaizany hanorina toeram-pivoahana, nivaona ny fanentanana nametahana sarin'andriamanitra tamin'ny rindrina : nanomboka nivalandrano teny amin'ny tarehin'ireo andriamanitra ny olona. Tsy nisy fiantraikany koa ny fanentanana tamin'ny endriny vaovao nanomezanahenatra imasom-bahoaka toy ny “Kamiaon'ny fivalanandrano“.
Noho izany antony izany ny fanehoankevitra nataon'i Adnan R Amin izay milaza fa ny vola lany tamin'ilay fanentanana– “vahaolana an-temaka mijery ny Endrika ivelany fa tsy ny Antony” – dia toa mitombina tsara raha azo nampiasaina tsara nanaovana toeram-pivoahana vaovao ho an'ny daholobe tao Dhaka.